ဓာတ်ပုံလှလှရိုက်ကြမယ် - PX
လှပကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရနိုင်ဖို့ဆိုတာ အသုံးပြုတဲ့ Camera ကောင်းရုံလောက်နဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ Camera ရဲ့နောက်ကွယ်က ရိုက်ကူးသူရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းပေါ်မှာလည်း အများကြီးမူတည်နေပါတယ်။ ဆိုတော့ကာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ Smartphone Camera က အကောင်းကြီးမဟုတ်လို့ဆိုပြီး အားငယ်နေစရာမလိုပါဘူး။ အောက်မှပြောပြပေးမယ့် အလွယ်ကူဆုံးအခြေခံနည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာရုံနဲ့ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Camera ရဲ့ အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကို ထုတ်ယူနိုင်မှာပါ။
– Camera Lens ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ
ရုတ်တရက်စဉ်းစားရင် ဘာမှမဟုတ်တဲ့အချက်လေးဆိုပေမယ့် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ ဓာတ်ပုံရနိုင်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့ Camera မှန်ပေါ်မှာ ဖုန်၊ ချွေးနဲ့ အဆီတွေ ပေကပ်မနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ Camera မှန်ကို သုတ်တဲ့အခါမှာလည်း တွေ့ကရာနဲ့ဖိသုတ်မယ့်အစား မျက်မှန်သုတ်တဲ့အ၀တ်လို နူးညံ့သန့်ရှင်းတဲ့အ၀တ်မျိုးကို သုံးရင် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
– လက်နှစ်ဖက်လုံးကို သုံးပါ
အပေါ်၊ အောက် ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုကြောင့် ဒီ Article က သင့်ကို ဂျင်းသိပ်နေပြီလို့ခံစားရပါသလား? (Selfie ကလွဲရင်) လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ပြီးစလွယ်ရိုက်တဲ့ပုံတွေဟာ Camera ကို ပိုမိုလှုပ်ခါစေနိုင်လို့ ပုံရိပ်ေ၀၀ါးတာတွေ၊ မညီညာတာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Image Stabilization မပါတဲ့ Camera တွေမှာ ပိုသိသာတယ်။ ဆိုတော့ကာ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သေချာကိုင်ပြီး လက်မ(သို့) လက်ညိုးနဲ့သေချာထောက်ရိုက်ပါ။ လက်မငြိမ်ဘူးလို့ခံစားရရင် တစ်ခုခုပေါ်မှာ လက်ကိုသေချာထောက်ပြီးရိုက်တာ၊ ပြေပြစ်တဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုခုပေါ်မှာ Camera ကို တင်ပြီးရိုက်ကူးပါ။
– အလင်းနဲ့ ပူးပေါင်းပါ
ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့မြင်ကွင်းပေါ် အလင်းရဲ့လားရာကို သိမြင်တတ်ခြင်းဟာလည်း ဓာတ်ပုံကောင်းရနိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ အလင်းလာရာဘက်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ထားပြီးရိုက်ကူးခြင်းဟာ ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ Object ကို အလင်းလုံလောက်အောင်မရောက်တာ၊ နောက်ခံရှုခင်းတွေမှာ အလင်းများပြီး ဖြူကုန်တာ (Light Burn) တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ချိန်တိုင်းမှာ အလင်းဟာ ကိုယ့်ဘက်မှာ ရှိနေပါစေ။
ဓာတ်ပုံပညာဆိုတာ ကျယ်ပြောလှတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ဘောင်ခတ်သိမ်းဆည်းခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ လောဘကြီးပြီး မလိုအပ်၊ မလှပတဲ့အရာတွေကို ဘောင်ထဲအတင်းဆွဲသွင်းခြင်းဟာ ဓာတ်ပုံရဲ့အလှတရားကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
ဥပမာ – လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာအမူအရာဟန်ပန်ကိုဖမ်းယူဖို့ သူ့ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးပါအောင် အတင်းရိုက်ယူဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ အဓိကကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာကို ပေါ်လွင်အောင် ဦးစားပေးရိုက်ကူးသင့်ပါတယ်။
လူ၊ အရာဝတ္ထု စတာတွေကို အသားပေးရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ တံခါး၊ ပြတင်းပေါက်တို့လို လေးထောင့်ဆန်တဲ့အရာတွေ၊ အ၀ိုင်းဆန်တဲ့အရာတွေ စတာတွေကို နောက်ခံထားရိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဓာတ်ပုံကို ရုပ်လုံးပိုပေါ်စေပြီး ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ Object ကိုလည်း ပိုပြီး ထင်သာမြင်သာစေပါတယ်။ အနုပညာလည်း ပိုမြောက်စေတာပေါ့။
– Rule of Odds (မ ဂဏန်းများ)
ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို (၁၊ ၃၊ ၅ စသည်ဖြင့်) မ ဂဏန်းဖြစ်အောင် ထားရိုက်တာက ကြည့်ရတာ မျက်စိပသာဒ ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ (အတွဲတွေကို မဆိုလိုပါ)
– Camera ပေါ်က Gridline များ
Smartphone Camera အတော်များများရဲ့ Camera Setting မှာ Gridline တွေ ဖော်ပြပေးတဲ့ Option ပါဝင်ပါတယ်။ Gridline Type အမျိုးမျိုးမှာ သုံးရအလွယ်ဆုံးကတော့ 3×3 ပါ။ ဒါဆိုဘာကြောင့် Gridline တွေ သုံးရသလဲ? သူ့ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်ရနိုင်မယ့်ကောင်းကျိုးတွေရှိနေတာကြောင့်ပါ။
အလွယ်ဆုံးပြောရရင် Rule of Thirds ဆိုတာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဟန်ချက်ညီညီရိုက်နိုင်ဖို့သုံးတဲ့ လူသိအများဆုံး စည်းမျဉ်းတစ်ခုပါ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ 3×3 Gridline မှာ မျဉ်းနှစ်ကြောင်းဆုံးတဲ့အမှတ် ၄ ခုကို Golden Points လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ်မှာ အဲဒီအမှတ်နေရာတွေဟာ ကြည့်ရှုသူရဲ့အာရုံစိုက်မှုကို အများဆုံးရတဲ့နေရာတွေလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့မြင်ကွင်းပေါ်က အသားပေးဖော်ပြချင်တဲ့ Object တွေကို အဲဒီအမှတ်တွေထဲက ၁ မှတ်၊ ဒါမှမဟုတ် ၂ မှတ်အထိ ပါအောင်ရိုက်ကူးခြင်းအားဖြင့် ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပုံတွေကို ရနိုင်မှာပါ။
2. Symmetry (အချိုးညီညာမှု)
3×3 Gridline မှာပါတဲ့မျဉ်းကြောင်းတွေဟာ ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့မြင်ကွင်းပေါ်က မျဉ်းဖြောင့်ဆန်တဲ့အရာတွေကို ဓာတ်ပုံပေါ်မှာညီညာနေအောင် အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အဆောက်အဦးတွေ၊ တောင်တန်းလိုရှုခင်းတွေကို တိမ်းစောင်းမနေပဲ တစ်ညီတစ်ညာတည်းဖြစ်အောင် Gridline တွေကို အသုံးပြုပြီး ချိန်ညှိရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေဟာ အရမ်းမခက်ခဲပဲ အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တာမို့ သတိထားလိုက်နာရင်း အရင်ကထက် ကိုယ့်ရဲ့ Smartphone Camera တွေကို အကောင်းဆုံးအသုံးချရင်း ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျား။
လှပကောငျးမှနျတဲ့ဓာတျပုံတဈပုံရနိုငျဖို့ဆိုတာ အသုံးပွုတဲ့ Camera ကောငျးရုံလောကျနဲ့ မလုံလောကျပါဘူး။ Camera ရဲ့နောကျကှယျက ရိုကျကူးသူရဲ့ ကြှမျးကငျြမှု၊ ဖနျတီးနိုငျစှမျးပျေါမှာလညျး အမြားကွီးမူတညျနပေါတယျ။ ဆိုတော့ကာ ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ Smartphone Camera က အကောငျးကွီးမဟုတျလို့ဆိုပွီး အားငယျနစေရာမလိုပါဘူး။ အောကျမှပွောပွပေးမယျ့ အလှယျကူဆုံးအခွခေံနညျးလမျးတှကေို လိုကျနာရုံနဲ့ ကိုယျ့ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ Camera ရဲ့ အကောငျးဆုံးအရညျအသှေးတှကေို ထုတျယူနိုငျမှာပါ။
– Camera Lens ကို သနျ့ရှငျးအောငျထားပါ
ရုတျတရကျစဉျးစားရငျ ဘာမှမဟုတျတဲ့အခကျြလေးဆိုပမေယျ့ ကွညျလငျပွတျသားတဲ့ ဓာတျပုံရနိုငျဖို့ ကိုယျ့ရဲ့ Camera မှနျပျေါမှာ ဖုနျ၊ ခြှေးနဲ့ အဆီတှေ ပကေပျမနဖေို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ပွီးတော့ Camera မှနျကို သုတျတဲ့အခါမှာလညျး တှကေ့ရာနဲ့ဖိသုတျမယျ့အစား မကျြမှနျသုတျတဲ့အဝတျလို နူးညံ့သနျ့ရှငျးတဲ့အဝတျမြိုးကို သုံးရငျ ပိုအဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။
– လကျနှဈဖကျလုံးကို သုံးပါ
အပျေါ၊ အောကျ ခေါငျးစဉျနှဈခုကွောငျ့ ဒီ Article က သငျ့ကို ဂငျြးသိပျနပွေီလို့ခံစားရပါသလား? (Selfie ကလှဲရငျ) လကျတဈဖကျတညျးနဲ့ ပွီးစလှယျရိုကျတဲ့ပုံတှဟော Camera ကို ပိုမိုလှုပျခါစနေိုငျလို့ ပုံရိပျဝေဝါးတာတှေ၊ မညီညာတာတှကေိုဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ Image Stabilization မပါတဲ့ Camera တှမှော ပိုသိသာတယျ။ ဆိုတော့ကာ လကျနှဈဖကျနဲ့ သခြောကိုငျပွီး လကျမ(သို့) လကျညိုးနဲ့သခြောထောကျရိုကျပါ။ လကျမငွိမျဘူးလို့ခံစားရရငျ တဈခုခုပျေါမှာ လကျကိုသခြောထောကျပွီးရိုကျတာ၊ ပွပွေဈတဲ့မကျြနှာပွငျတဈခုခုပျေါမှာ Camera ကို တငျပွီးရိုကျကူးပါ။
– အလငျးနဲ့ ပူးပေါငျးပါ
ကိုယျရိုကျခငျြတဲ့မွငျကှငျးပျေါ အလငျးရဲ့လားရာကို သိမွငျတတျခွငျးဟာလညျး ဓာတျပုံကောငျးရနိုငျဖို့ အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ အလငျးလာရာဘကျကို မကျြနှာခငျြးဆိုငျထားပွီးရိုကျကူးခွငျးဟာ ကိုယျရိုကျခငျြတဲ့ Object ကို အလငျးလုံလောကျအောငျမရောကျတာ၊ နောကျခံရှုခငျးတှမှော အလငျးမြားပွီး ဖွူကုနျတာ (Light Burn) တှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဓာတျပုံရိုကျခြိနျတိုငျးမှာ အလငျးဟာ ကိုယျ့ဘကျမှာ ရှိနပေါစေ။
ဓာတျပုံပညာဆိုတာ ကယျြပွောလှတဲ့ ပတျဝနျးကငျြကနေ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခုကို ဘောငျခတျသိမျးဆညျးခွငျးတဈမြိုးပါပဲ။ လောဘကွီးပွီး မလိုအပျ၊ မလှပတဲ့အရာတှကေို ဘောငျထဲအတငျးဆှဲသှငျးခွငျးဟာ ဓာတျပုံရဲ့အလှတရားကို ထိခိုကျစပေါတယျ။
ဥပမာ – လူတဈယောကျရဲ့မကျြနှာအမူအရာဟနျပနျကိုဖမျးယူဖို့ သူ့ခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးပါအောငျ အတငျးရိုကျယူဖို့မလိုအပျပါဘူး။ အဓိကကိုယျလိုခငျြတဲ့အရာကို ပျေါလှငျအောငျ ဦးစားပေးရိုကျကူးသငျ့ပါတယျ။
လူ၊ အရာဝတ်ထု စတာတှကေို အသားပေးရိုကျကူးတဲ့အခါမှာ တံခါး၊ ပွတငျးပေါကျတို့လို လေးထောငျ့ဆနျတဲ့အရာတှေ၊ အဝိုငျးဆနျတဲ့အရာတှေ စတာတှကေို နောကျခံထားရိုကျခွငျးအားဖွငျ့ ဓာတျပုံကို ရုပျလုံးပိုပျေါစပွေီး ကိုယျရိုကျခငျြတဲ့ Object ကိုလညျး ပိုပွီး ထငျသာမွငျသာစပေါတယျ။ အနုပညာလညျး ပိုမွောကျစတောပေါ့။
– Rule of Odds (မ ဂဏနျးမြား)
ကိုယျရိုကျခငျြတဲ့ အရာဝတ်ထုတှကေို (၁၊ ၃၊ ၅ စသညျဖွငျ့) မ ဂဏနျးဖွဈအောငျ ထားရိုကျတာက ကွညျ့ရတာ မကျြစိပသာဒ ပိုဖွဈစပေါတယျ။ (အတှဲတှကေို မဆိုလိုပါ)
– Camera ပျေါက Gridline မြား
Smartphone Camera အတျောမြားမြားရဲ့ Camera Setting မှာ Gridline တှေ ဖျောပွပေးတဲ့ Option ပါဝငျပါတယျ။ Gridline Type အမြိုးမြိုးမှာ သုံးရအလှယျဆုံးကတော့ 3×3 ပါ။ ဒါဆိုဘာကွောငျ့ Gridline တှေ သုံးရသလဲ? သူ့ကိုသုံးခွငျးအားဖွငျ့ရနိုငျမယျ့ကောငျးကြိုးတှရှေိနတောကွောငျ့ပါ။
အလှယျဆုံးပွောရရငျ Rule of Thirds ဆိုတာ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပုံရိပျတှကေို ဟနျခကျြညီညီရိုကျနိုငျဖို့သုံးတဲ့ လူသိအမြားဆုံး စညျးမဉျြးတဈခုပါ။ အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ 3×3 Gridline မှာ မဉျြးနှဈကွောငျးဆုံးတဲ့အမှတျ ၄ ခုကို Golden Points လို့ ချေါပါတယျ။ လလေ့ာခကျြတှအေရ ဓာတျပုံတဈပုံပျေါမှာ အဲဒီအမှတျနရောတှဟော ကွညျ့ရှုသူရဲ့အာရုံစိုကျမှုကို အမြားဆုံးရတဲ့နရောတှလေို့ ဆိုထားပါတယျ။ ဒီတော့ ကိုယျရိုကျခငျြတဲ့မွငျကှငျးပျေါက အသားပေးဖျောပွခငျြတဲ့ Object တှကေို အဲဒီအမှတျတှထေဲက ၁ မှတျ၊ ဒါမှမဟုတျ ၂ မှတျအထိ ပါအောငျရိုကျကူးခွငျးအားဖွငျ့ ပိုပွီးစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ပုံတှကေို ရနိုငျမှာပါ။
2. Symmetry (အခြိုးညီညာမှု)
3×3 Gridline မှာပါတဲ့မဉျြးကွောငျးတှဟော ကိုယျရိုကျခငျြတဲ့မွငျကှငျးပျေါက မဉျြးဖွောငျ့ဆနျတဲ့အရာတှကေို ဓာတျပုံပျေါမှာညီညာနအေောငျ အထောကျအကူပေးနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ အဆောကျအဦးတှေ၊ တောငျတနျးလိုရှုခငျးတှကေို တိမျးစောငျးမနပေဲ တဈညီတဈညာတညျးဖွဈအောငျ Gridline တှကေို အသုံးပွုပွီး ခြိနျညှိရိုကျကူးနိုငျပါတယျ။
အပျေါမှာဖျောပွခဲ့တဲ့အခကျြလေးတှဟော အရမျးမခကျခဲပဲ အထောကျအကူဖွဈစနေိုငျတာမို့ သတိထားလိုကျနာရငျး အရငျကထကျ ကိုယျ့ရဲ့ Smartphone Camera တှကေို အကောငျးဆုံးအသုံးခရြငျး ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ဓာတျပုံတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစဗြေား။
RAM 12GB ပါဝင်လာမဲ့ Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition